युवतीले चमेरोको झोल खाइन्, त्यसैले कोरोना भाइरस संसारभर फैलियो ! भिडियो भयो भाइरल - Mitho Khabar
युवतीले चमेरोको झोल खाइन्, त्यसैले कोरोना भाइरस संसारभर फैलियो ! भिडियो भयो भाइरल
January 30, 2020 February 4, 2020 mithokhabarLeaveaComment on युवतीले चमेरोको झोल खाइन्, त्यसैले कोरोना भाइरस संसारभर फैलियो ! भिडियो भयो भाइरल
एजेन्सी- चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिएका एक डाक्टरको निधन भएको छ। चीनको हुबेई सिन्ह्वा अस्पतालमा कार्यरत ६२ वर्षीय डाक्टर लियाङ वुदोङको कोरोना भाइरसकै कारण निधन भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यम चाइना ग्लोबल टेलिभिजनले लेखेको छ।
उक्त समाचार अनुसार कोरोना भाइरसका कारण डाक्टरको नै निधन भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। डा वुदोङको निधनसँगै चीनमा कोरोना भाइरसका कारण निधन हुनेको संख्या ४२ पुगेको छ। भाइरसका कारण चीनमा १ हजार २ सय भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। डा वुदोङ कोरोना भाइसरको नियन्त्रणका लागि निरन्तर खटिएका थिए। चीनमा यो भाइरस सबैभन्दा पहिला उहान सहरमा भेटिएको थियो।
चीनसँगै यो भाइरसको सं’क्रमण अहिलेसम्म जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, अमेरिका र नेपालमा समेत देखिएको छ। चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायतका देश हुँदै नेपालसम्म पुगेको पुष्टि भएको छ। भारतको मुम्बईमा २ जनामा उक्त संदिग्ध स’ङ्क्रमण फेला परेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।
उनीहरुबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा पनि चीनको वुहान प्रान्तबाट फर्केका एक विरामी विद्यार्थीमा सं’क्रमण फेला परेको हो। हालसम्म चीनमा उक्त घातक भाइरसका कारण ४१ जनाको निधन भइसकेको छ। १२८७ जना मानिस स’ङ्क्र’मित छन्। कोरोना भाइरसको स’ङ्क्र’मण फैलिने चिन्ता बढेपछि चीनले ख्हबेई प्रान्तका नगरहरूमा यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। करिब दुई करोड मानिसलाई यात्रा नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल बनेको छ। जसमा युवतीले चमेरो खाएपछि उनी मार्फत कोरोना भाइरस फैलिएको दाबी गरिएको छ। डेलिमेलको एक रिपोर्टमा युवतीले चमेरोको झोल पिउँदै गरेको देखिन्छ।
चमेरोबाट नै भाइरस पैदा भएको कुराको पुस्टी भने भएको छैन। चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अझै पनि भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने कुरा खोजीरहेका छन्। अधिकारीहरुले वुहानको समुद्री क्षेत्रबाट भाइरस आएको विश्वास गरेका छन् । जहाँ गैरकानुनी रुपमा वन्यजन्तुको किनबेच हुने गरेकोे छ। एक चिनियाँ वैज्ञानिकले कोरोना भाइरस सर्प र जंगली बिरालोबाट मानिसहरूमा फैलिएको बताए।
यो भाइरसको केन्द्रविन्दु रहेको चीनको वुहानमा मानिसहरुले सर्प, चमेरो, भ्यागुता,मार्मोट्स, खरायो लगायतका जिवजन्तु खाने गरेका छन। चिनियाँ वैज्ञानिकहरुका अनुसार चिनियाँ कोब्रा सर्प पनि कोरोना भाइरसको स्रोत हुनसक्छ। चीनमा स’ङ्क्र’मण बढ्दै गएपछि ज्या’न जानेको सङ्ख्या अझै बढ्ने भय व्यक्त भइरहेका छन्।
कोरोना भाइरसबारे सावधानी अपनाउन चीनमा रहेका नेपालीलाई आग्रह
चीनमा माहामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबारे सावधानी अपनाउन बेइजिङस्थीत नेपाली दूतावासले चीनमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार दूतावासले सूचना जारी गर्दै संक्रमण फैलिरहेको हबुेई प्रान्तको राजधानी सहर उहानमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गरेको हो।
भाइरसका कारण अहिलेसम्म त्यहाँ २५ जनाको ज्यान गइसकेको छ। सं’क्रम’ण फैलिने चिन्ता बढ्दै गएपछि त्यहाँका नगरहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दूतावासले सं’क्र’मण’बाट जोगिने उपायहरुबारे पनि जानकारी गराएको छ।
चीनबाट फर्केका नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस भएको पुष्टि
चीनबाट नेपाल आएका एक नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि भएको छ। चीनको उहान सहरबाट हालसालै नेपाल फर्किएका ती विद्यार्थीको उपचार समेत भइसकेको छ। टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचारपछि उनी डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
चीनबाट फर्किएलगत्तै कोरोना भाइरसको जस्तै लक्षण देखिएपछि ती विद्यार्थी उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए। शं’कास्पद ती विद्यार्थीको नमुना परीक्षणका लागि हङकङमा पठाइएको थियो। नमुना परीक्षणमा कोरोना भइरस पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
पछिल्लो समय चीन, हङकङ, जापान, अमेरिका लगायतका देशमा समेत यो भाइरसका बिरामी फेला परिसकेका छन्। श्वासप्रस्वासका माध्यमबाट सर्ने यो भाइरसको जोखिम बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उच्च सतर्कता अपनाइसकेको छ।
के हो कोरोना भाइरस?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार कोरोना भाइरसको समूह हो। जसले विशेषगरी श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्छ। कोरोना भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ। यसले सामान्य रुघाखोकीदेखि निमोनिया गराउने अनि मानिसको निधनसम्म हुन्छ।
अहिले देखिएको कोरोना भाइरस नयाँ प्रकारका हो। जुन पहिले मानिसमा पहिचान भएको थिएन। डब्लुएचओका अनुसार कोरोना भाइरसले मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (मार्स) र सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स) को समस्या निम्त्याउँछ।
अभिनेता शाहरुख खानकी बहिनीको निधन, शोकमा खान परिवार
२ श्रीमती भएपछि, पुलिस थानामा श्रीमानको बाँडफाँटः श्रीमती–प्रेमिकासँग ३–३ दिन बस्ने, एक दिन छुट्टी पनि
नाम चलेको यी २ अभिनेत्रीहरु होटलबाट प’क्राउ
October 27, 2020 mithokhabar
January 29, 2020 February 4, 2020 mithokhabar
किन राखिन्छ हवाई जहाज चढ्नासाथ मोबाइल फ्लाइट मोडमा ? जान्नुहोस तथ्य
June 26, 2021 Mitho Khabar